होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि रु २ करोड विनियोजन - Arthapage
होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि रु २ करोड विनियोजन
प्रकाशित मितिः ४ असार २०७७, बिहीबार १४:१० June 18, 2020
नेपालगन्ज ४ असार : प्रदेश नं. ५ मा होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकारले रु २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले होमस्टे प्रवद्र्धनका लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो ।
स्थानीय समुदायको संलग्नतामा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न होमस्टेलाई स्थानीय संस्कृति, भेषभूषा, मौलिकता, परम्परागत पेशा र अर्गानिक तथा घरेलु उत्पादनसँग आबद्ध गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ । होमस्टेमा पूर्वाधार विकासको लागि रू. २ करोड विनियोजन गरिएको हो ।
प्रदेश ५ मा होमस्टेको आर्कषण बढेको छ । पर्यक आर्कषित गर्न होमस्टे प्रवद्र्धनको आवाज उठ्दै आएको गाभर भ्याली होमस्टेका संस्थापक एवं होमस्टे एशोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष कृष्ण चौधरी बताउँछन् ।
उनले होमस्टेलाई प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धन विकासका लागि निम्न योजना अघि सारेको छ ।-
प्रकाशित मितिः ४ असार २०७७, बिहीबार १४:१० |
Prevपल्सर १५० किन्नेलाई उपलब्ध तीन अप्सन, यस्तो छ मासिक किस्ता
Nextमोटरसाइकल र स्कुटरमा आयो भारी छुट